Ndị Omeiwu: Ijeri 6000 F iji nye mmadụ niile ọkụ eletrik - TELES Relay
Ndị Omeiwu: ijeri 6000 F iji nye mmadụ niile ọkụ
By TELES RELAY	 On June 28, 2021
Nkwupụta a nke Mịnịsta na Mmiri na Energy, Gaston Eloundou Essomba mere n'oge nnọkọ pụrụ iche na June 28 na Mgbakọ Mba, na-achọ ịkwụsị njedebe ikike site na 2035 na Cameroon.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa asaa nke mkparịta ụka banyere isiokwu gbasara ọdịmma mba. Na etiti nke nzukọ a, isi okwu: otu esi emeri nsogbu nke ịnweta mmiri na ọkụ eletrik na Cameroon? Ajụjụ a dị oke mkpa na ndị nnọchite anya 7 esorola ibe ha n'ihu Mịnịsta na-ahụ maka mmiri na ume (Minee) iji dozie mkpa dị mkpa nke ndị mmadụ. N'ime ajụjụ ndị ọzọ: gịnị kpatara ọtụtụ ibu ibu, mpaghara nke enweghị mmiri ọ drinkingụ drinkingụ? Olee otú ịkọwa overbilling na eneo et Camwatter ezughi oke na oriri? Ọ nwere iwu gọọmentị na electrification nke ime obodo dị na Cameroon? Ajuju di otutu nke ndi nhoputa hoputara nke mpaghara 10.
Gaston Eloundou Essomba, nkem
Nkọwa nke Minee
N’ịtụle ọnọdụ nke mmiri na ọkụ eletrik, Mịnịsta Gaston Eloundou Essomba kwuru na: “N’obodo, ihe karịrị 60% nke okporo osisi e kesara. Ogologo mbubata na oke oke nke akụrụngwa mmepụta na enweghị mmezi bụ isi ihe na - akpata ibu ibu ibu ”. Maka okwu a kapịrị ọnụ nke ugwu, ọ mere ka ọ pụta ìhè na: "Otu n'ime ihe na-akpata ibu ibu na ngalaba njikọta dị na North bụ ajọ mmiri ozuzo na okporo osisi na-ada". Iji nagide nke a, "ebufere ndị na-enye ọkụ 27 na mwepụta nke ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ nke anyanwụ" ka o kwuru. Dabere na Minee, ebumnuche bụ isi bụ inye Cameroon otu netwọk jikọtara ọnụ. Mana maka inweta ọkụ eletrik zuru ụwa ọnụ, Ọchịchị ga-achọ 6000 ijeri CFA franc site na 2035.
Dị ka Minista mmiri na ume si kwuo, a na-eme ya iji dochie okporo osisi ndị ahụ. Ego metụtara ya dị. Ihe ịma aka dị na ọnụọgụ mmepụta kwa afọ.
Gaston Eloundou Essomba na-ekwuputakwa iwu nke olulu mmiri 3000 na mpaghara nke Far North iji kwado ohere ịnweta mmiri ọ drinkingụ withụ site na nkwado nke World Bank. A ga-agbanye 2000 megawatts na ntanetị jikọọ na South na North, iji kwụọ ụgwọ ọnụego nke ịnweta ọkụ ugbu a bụ 55% na Cameroon. "N'ụbọchị ndị na-abịanụ, nsogbu ọkụ eletrik ga-ebelata na East ọwụwa n'ihe gbasara ọrụ ndị a na-aga" na-emesi Minee obi ike. N'ihe banyere North-West na South-West, "Gọọmentị na-arụ ọrụ iji mee ka ọrụ ndị a gaa n'ihu" ka o kwuru. Minee goziri Eneo, nke na-ahụ maka mmepụta, nkesa na ọrịre nke ike eletrik na Cameroon, iji wusie ndị otu aka ike, iji tinye ọnụahịa ziri ezi na Sonatrel iji mee ngwa ngwa gbue. NaUbọchi na-ahụ maka iwu, na-ahụ nrube isi na ịgba ụgwọ oriri.
Ndị nnọchi anya mba na-atụ aro, n'etiti ihe ndị ọzọ:
- Mepee mmekorita ndi mmadu na ndi mmadu iji meziwanye ike;
- Ime ka ohere onu ogugu ndi mmadu n’ime ime obodo nwee ike inweta mmiri onunu;
- Nabata atumatu ọha na eze kwesiri ekwesi na ume ọhụrụ.
- Tinye ntinye ọnụahịa a na-akwụghị ụgwọ nke na-echeba obere ego nke ezinụlọ;
- Gụgharịa envelopu nke ndị Minista nke Mines, Mmiri na Energy;
- Mee ka ọha na eze mata banyere ịdị ọcha na mmiri ọcha.
Dieudonné Zra (@IGIHE
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.crtv.cm/2021/06/parlement-6000-milliards-de-f-pour-offre-lelectricite-a-tous/
10 ọgwụgwọ ụlọ iji dozie ikiri ụkwụ gbawara agbawa ma nwee ụkwụ mara mma - SANTE PLUS MAG
Messi na-enye Alejandro Gómez nri ka o nye Argentina Argentina akara Bolivia